Thenga ukuthandwa ngokuzenzekelayo kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli Follow ➡️
Disemba 14, 2018 0 IiCententarios 846
Iakhawunti ye-Instagram enxibelelanayo kunye namakhulu okuthandwa atsala izithuba zayo kwabanye abasebenzisi ngokuzenzekelayo. Nokuba yeyiphi inombolo abalandeli yiba nale profayile, yenza unxibelelwano lwangaphandle ukuthenga okuthandayo ngokuzenzekelayo kwi-Instagram ngokungathandabuzekiyo inyusa umgangatho weakhawunti kwaye, ke, ukubonakala kunye nefuthe kuthungelwano lwentlalo.
Ukuthenga ukuthandwa ngokuzenzekelayo kwi-Instagram ayinikezi i-akhawunti ukuthandwa ngakumbi, kodwa kunceda iiposi zakho ukuba zijongwe yinani elikhulu labantu bokwenyani. Into eyakuthi ekugqibeleni ithethe ukuba ungaphumelela ukuthandwa ngakumbi kwaye abalandeli, kuba i-Instagram iya kubeka umxholo kwiindawo zokuqala.
Kodwa ngaphambili Thenga ukuthandwa ngokuzenzekelayo kwi-Instagram, kuya kufuneka uhlole inani lezinto.
Thenga ukuthanda okuzenzekelayo kuxhomekeke kwinani lethu labalandeli
Okokuqala, kuya kufuneka uzibuze ukuba zingaphi izinto ozithandayo oza kuyithenga ukuze iimpapasho zethu zibonakale kweyona ndawo ibalaseleyo ye-Instagram. Ewe, ngokwenyani, akukho manani libekiweyo okanye limiselweyo, nangona kucetyiswa ngokubanzi ukuba inani lingqinelane ne Inani labalandeli esinayo, ngeenxa 20% malunga.
Kucacile ukuba ukuba sinabalandeli abangama-20 kwaye enye yeempapasho zethu inezinto ezili-1.000 XNUMX ezithandayo ngeyure enye, kukho into engalunganga. Oku kuya kuqatshelwa nge-Instagram kwaye kunokwenzeka ukuba uthathe inyathelo kwiakhawunti yethu. Kuya kuba njenge Inani labalandeli kwiakhawunti yethu xa singathenga ukuthandwa okuzenzekelayo.
Ungakuthenga njani ukuthanda okuzenzekelayo kwi-Instagram
Into efunekayo yokuthenga ngokuzenzekelayo kukuba iakhawunti ye-Instagram isesidlangalaleni kwaye ayimfihlo.
Ukuthengwa kokuthandwa ngokuzenzekelayo kunokuqhutywa kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ezinikezela ngale nkonzo namhlanje. Umsebenzi uninzi lwawo ulula kakhulu:
Silayisha iposti kwiakhawunti yethu ye-Instagram.
Inkqubo ibona ushicilelo olutsha kwaye yonyusa ukuthanda ngexesha esikhethileyo.
Njengoko sibona, Kukhethwa ukuba ukhethe iwebhusayithi esivumela ukuba sandise ukuthanda ngokuthe chu. Ngale ndlela, asiyi kutsala ingqalelo enkulu kwaye sinike ukubukeka kwendalo ngakumbi. Kuyakwazi ukukhankanya ukuba sifuna kuphela ukuthandwa kwemvelaphi yesiLatin okanye elinye ilizwe, ixesha esifuna ukubamkela.
Inzuzo ephambili yokuthenga ngokuzenzekelayo kwi-Instagram ilele ekufumaneni ukuba ungathengi iiphakheji zokuthandwa amaxesha ngamaxesha. Ukuziqhelanisa okuxhaphake kakhulu phakathi kwezo akhawunti zinesicwangciso esibanzi kwaye esihlala ixesha elide.
Kule meko, ngalo lonke ixesha abapapasha kwi-Instagram bafumana inani lokuthandwa okwenziwe kwisivumelwano. Iintlawulo zokuthandwa ezizenzekelayo zihlala zenziwa qho ngenyanga kwaye inkonzo inokupheliswa nangaliphi na ixesha sakuba sizifumene iziphumo ebesizilindele.
Ngamafutshane, zininzi iimveliso kunye neenkampani esele zithenga ukuthandwa okuzenzekelayo kwe-Instagram. Eyona ndlela ilula, ekhawulezayo kunye neyona ndlela inoqoqosho yokubeka umxholo wakho phakathi kwezona zibalulekileyo nezithandwayo kolu nxibelelwano loluntu. Olunye ukhetho lusenokuba yile Thenga abalandeli kwi-Instagram ukwandisa ubunzima bakho ekuhlaleni.
1 Thenga ukuthanda okuzenzekelayo kuxhomekeke kwinani lethu labalandeli
2 Ungakuthenga njani ukuthanda okuzenzekelayo kwi-Instagram
Kutheni uthenge abalandeli beYouTube